यसरी गर्नुहोस् दादको सफल उपचार, जानी राखौ
अगस्ट 11, 2019 अगस्ट 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments उपचार, डा. राम बहादुर बोहरा, दाद
आज नेपालमा दादका रोगी हरेक घरमा छन् । दादका हजारौं किसिमको औषधिहरू विभिन्न नामले कम्पनीले ल्यायता पनि औषधिले केहि समय काम गर्ने पुन सुरू हुने गरेका छन् । पैसा गयो तर रोग जान सकेन हरेकको बोलीमा यो सुन्न सकिन्छ ।
आखिर किन दादको उपचार हुन सकेको छैन । यसको ठोस कारण रोगको सहि पहिचान र औषधि हुन नसकेको होकी या औषधि नै बेठिक हो बुझ्न गार्हो भएको छ । दादले नेपालमा माहामारीको रूप लिएको छ ।
चिकित्सकीय भाषामा दादलाई एग्जिमा भनिन्छ । दाद आएपछि छाला बाक्लो हुने, फुस्रिने, चिलाउने र फोका उठ्ने हुन्छ । विशेषगरी यसले गर्मी महिनामा धेरैलाई सताउँछ । आम मानिसले छालामा आउने सबै खाले एलर्जीलाई दाद भन्ने गर्छन् ।
शरिरमा एलर्जिकका कारण यस्तो समस्या देखा पर्न सक्छ । शरीरमा हुने रसायन परिवर्तन हुँदा विभिन्न दाद निस्किन्छन् । ती एटोपिक डर्माटाइटिस, स्कोरिक, न्युमुलर र स्टासिस एग्जिमा हुन् । दाद खास गरि फंगसका कारणले हुने गर्दछ । यद्यपि, ती सबै दाद होइनन् । आजको लेखमा दादको गुप्त योग यहाँ पस्कन गइरहेको छु । फाइदा उठाउन नभुल्नुहोला ।
१.२० ग्राम जति तारपीनको तेलमा १० ग्राम जति कपुर मिलाएर सिसिमा राख्नुहोस् । आवश्याकताको समयमा कपासमा डुबाएर दाद भएको ठाउमा लगाउनुस दाद निको हुन्छ । हेर्दा वा सुन्दा मामुली लाग्न सक्छ तर यस्ले हजारौं रूपया बराबरको काम गर्दछ ।
← भिडभाड मन नपरी एक्लै बस्न रुचाउने ४ राशिहरु
शास्त्र अनुसार शरीरको कुन अंग फर्फराउँदा के हुन्छ ? →